ईमेलहरू प्राप्त भइरहेको छैन? एक SPF रेकर्ड जोड्नुहोस्! | Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 30, 2008 शुक्रबार, जुन 19, 2015 Douglas Karr
मैले भर्खर मेरो कम्पनीको ईमेलमा यसमा माइग्रेट गरें गुगल अनुप्रयोगहरू। अहिले सम्म हामी वास्तवमा हामीलाई प्रदान गर्ने स्वतन्त्रतालाई माया गर्छौं। गुगलमा हुनु भन्दा पहिले हामीले कुनै परिवर्तन, सूचि जोड्न, इत्यादिका लागि अनुरोध राख्नुपर्दछ। अब हामी यसलाई गुगलको साधारण इन्टरफेस मार्फत सबै ह्यान्डल गर्न सक्दछौं।
एउटा धक्का हामीले याद ग .्यौं, त्यो केहि ईमेलबाट आएको हो हाम्रो प्रणाली वास्तवमा यसलाई बनाइरहेको छैन us। मैले गुगलको सल्लाहमा केहि पढेको थिएँ बल्क ईमेल प्रेषकहरू र चाँडै काममा लाग्यो। हामीसँग २ अनुप्रयोगहरू बाहिर आउँदैछन् जुन हामीले होस्ट गर्छौं, अर्को अनुप्रयोग जुन कसैले अन्य ईमेल सेवा प्रदायकको अलावा होस्ट गर्दछ।
मेरो मात्र सोच यो छ कि Google अनियमित रूपमा केहि ईमेल ब्लक गर्दै छ किनकि यसले प्रेषकलाई एक मार्फत मान्य गर्न सक्दैन एसपीएफ रेकर्ड। संक्षेपमा, SPF एक विधि हो जहाँ तपाइँ तपाइँका सबै डोमेनहरू, IP ठेगानाहरू, इत्यादि दर्ता गर्नुहुन्छ जुन तपाइँ एक डोमेन रेकर्ड भित्र ईमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ। यसले कुनै पनि ISP लाई अनुमति दिन्छ तपाईंको रेकर्ड खोज्नुहोस् र ईमेललाई मान्य गर्नुहोस् उपयुक्त स्रोतबाट आउँदैछ।
यो एक उत्तम विचार हो - र मलाई निश्चित छैन किन यो दुबै emailers र स्प्याम ब्लक गर्ने प्रणाली को एक मुख्य धारा तरीका हो। तपाईले सोच्नुहुन्छ कि प्रत्येक डोमेन रेजिष्टरले कसैलाई पठाउन चाहेको ईमेलका स्रोतहरू सूचीबद्ध गर्नका लागि यसमा विजार्ड निर्माण गर्नका लागि विन्दु बनाउँदछ। सबैजना एसपीएफको साथ प्रयोग र प्रमाणित गरिनुपर्दछ! यहाँ छ एसपीएफ र फाइदाहरूको बारेमा गहन लेख, ती मध्ये एक स्प्यामर द्वारा कालोसूचीबाट तपाईंको डोमेनलाई बचाउन सक्ने क्षमता हो बहस गर्ने तपाईं हुन।
सुझाव: तपाई सक्नुहुन्छ तपाईंको एसपीएफ रेकर्ड प्रमाणित गर्नुहोस् 250ok मा।
तपाईंको एसपीएफ रेकर्ड लेख्न, तपाईं मात्र सम्म जानु पर्छ एसपीएफ विजार्ड, तपाइँको लागि रेकर्ड लेख्न सहयोग गर्नको लागि एक अनलाइन उपकरण। त्यसो भए तपाईले आफ्नो डोमेन रजिष्ट्रेसनमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्। हामी हाम्रो रेकर्ड अपडेट गर्दैछौं जुन यो पोष्ट लेख्छु!
मेरो सूचीमा अर्को शोध गर्दैछ डोमेन कुञ्जीहरू। हामी छँदा अगाडि बढ्यौं एओएलको साथ ह्वाइटलिस्ट गरिएको पछिल्लो वर्ष मलाई लाग्छ युद्ध कहिले पनि बन्द हुँदैन! धेरै खराब यो वास्तवमा हो सम्मानित कम्पनीहरू जुन सबै स्पाम हुप्स मार्फत जानु पर्छ अझै!
टैग: 250okछुटकाराइनबक्सजंकप्रेषक नीति ढाँचास्पामस्पाम फिल्टरspfspf रेकर्ड
सहमतिले तपाईलाई सफलता दिदैन
अप्रिल 30, 2008 मा 10: 03 PM
SPF र प्रेषक ID को समस्या अनिवार्य रूपमा यसले इमेल फर्वार्डिङ तोड्छ। DomainKeys (र मानक जसलाई अहिले DKIM भनिन्छ) भविष्यको लहर हो, जहाँसम्म अधिकांश मानिसहरू चिन्तित छन्; यद्यपि, यसलाई लागू गर्न र प्रमाणीकरण गर्न अझ गाह्रो छ।